Mmepụta akara nke nkịtị oghe leveling igwe
Ahịrị na -emepụta ọkwa bụ akụrụngwa a na -ejikarị arụ ọrụ na nhazi igwe. Ọdịdị nke ahịrị nrụpụta igwe na -adaberekarị na ọkpụrụkpụ, ihe na ihe achọrọ nke warara a ga -agba.
Enwere ike kewaa ụdị ọkwa na ụzọ abụọ
1. ahịrị nrụpụta igwe: ejiri ya maka ịkpụcha ogologo ka ọ gbasasịrị efere igwe, ọ bụkwa ngwa na-akwado maka ahịrị mmepụta nke ngwa igwe.
2. Igwe kwụ ọtọ kwụụrụ onwe ya: n'ozuzu ya dabara adaba ka ọ dị otu mpempe akwụkwọ igwe.
3. Nri ọkwa: dị mma maka ọkwa akpaaka na nri teepu n'oge usoro stampụ.
Isi akụrụngwa nke otu ahụ bụ igwe anaghị agba nchara, nke ọkụ eletrik na -agbapụta ya, igwe na -akpụzi, ngwaọrụ ịgbatị na ngwaọrụ ịcha ogologo ogologo (ụdị njikwa ọnụọgụ); A na -eji aka dobe eriri nchara a ga -eji rụọ ya n'elu ihe na -ewepu ya site na forklift ma ọ bụ kreen. Mgbe agbatịchara akwụkwọ ntuziaka, a na -eji aka eziga akụrụngwa n'ime igwe mpịakọta na -akpụ maka akpaka na -aga n'ihu, mgbe ahụ, a ga -etinye nha nke ọrụ achọrọ site na ihuenyo mmetụ iji ghọta mmepụta na -aga n'ihu nke okpokolo ụzọ nwere ogologo dị iche iche.
Ewepụghị etiti igwe